DUQA HALOO SHEEGO: MAQAAL – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 4 March 2015 5 March 2015
Hadaba waxaa isweydiin leh, shaqadu waamaxay? sidee uga faa’iideysteen tirada intaas la’eg? dowladuse maxay ka gashaa ama kaga aadan?
Shaqooyinka ay dadku samaysteen ee ay dalka ku joogaan waa fara badan yihiin, laakiin waxaan maanta doonayaa in aan farta ku godo mid ka mid ah oo faa’iido gaar ah u leh dhalinyarada.
Qaabka ay 40.000 uga faa’iideysatay hadii aan sharaxana waa sida tan .
Hogaamiyaasha Koonfurta Sudan oo ku guul dareystay heshiis awood qeybsi ah